တကယ် စစ်ဖို့ လိုနေပြီကွယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » တကယ် စစ်ဖို့ လိုနေပြီကွယ်
တကယ် စစ်ဖို့ လိုနေပြီကွယ်
Posted by moethidasoe on Jul 13, 2011 in Creative Writing, Health & Fitness, Short Story | 17 comments
ကူးစက်နည်း စစ်ဖို့ လက်ထပ်ခါနီး သွေးစစ်ကြမယ် အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ
“ဆရာမရယ် .. သူက လက်ထပ်ခါနီးမှ သွေးစစ်မယ်လို့ ပြောနေတယ် .. အဲဒါ တကယ် လိုလို့လား .. ဟင် .. ဘာအတွက် စစ်ရမှာလဲ .. ကျမကို မယုံရင် လက်မထပ်နဲ့ပေါ့ .. အခုတော့ ကျမ သိက္ခာ ကျတာပေါ့ .. သူ လာရင် ဆရာမ ကြည့်ပြောပေးပါဦး”
ဒီလုရှိတယ် သမီးရဲ့ .. ဆရာမလဲ မကြာမကြာ ပြောဖူးသားပဲ .. အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်တာ .. မြင်ရုံနဲ့တော့ ရှိ မရှိ မသိနိုင်ဘူး ..
ကူးတဲ့နည်းတွေ သိနေပေမယ့် သူ ဘယ်လို နည်းနဲ့ ကိုယ်ထဲ ၀င်လာမလဲ ဆိုတာ မသိနိုင်ဘူးလေ .. ကိုယ်က မဟုတ်တာ လုပ်တာ မဟုတ်ပေမယ့်လဲ တခါတလေ .. ကိုယ် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ လုပ်မိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ ၀င်လာတတ်တယ် .. ကူးစက်နည်းတွေလဲ သမီး သိပြီးသားပဲဟာ .. လိင်ကချည်း ကူးတာ မဟုတ်ဘူးလေ .. တခါတလေ ရှားရှားပါးပါး ဖြစ်နိုင်ချေ နည်းပါတယ် ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းတွေကတဆင့် ကိုယ့်ဆီကို ကူးစက်သွားတတ်တယ် .. ဒါကြောင့် စစ်ကြည့်တာ မမှားဘူး .. နှစ်ယောက်စလုံးတော့ စစ်မှဖြစ်မယ် .. ဒါမှလဲ ပိုးကင်းစင်တဲ့ သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ရေး ဖြစ်တော့မှာပေါ့ .. မွေးလာကြမယ့် ကလေးအတွက်လဲ ပိုးကင်းစင်မှာပေါ့ .. မဟုတ်ဘူးလား
(အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပိုးဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်တယ်လို့ သင်တန်းမှာ ဆရာတွေ ပြောပြထားပါတယ် .. ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ .. ဒီလူ .. ဘယ်တုန်းက .. ဘယ်သူတွေနဲ့ .. ဘာလုပ်ခဲ့တယ် ဆိုတာကို သူကိုယ်တိုင် မပြောရင် ဘယ်သူ သိနိုင်မှာလဲ .. ဒါဆိုရင် သူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီပိုး ရှိနေ မနေကို ဘယ်သူ ခန့်မှန်းလို့ ရမှာလဲ .. နောက်ပြီး အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ ပိုး ၀င်တဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိပြီး အေအိုင်ဒီအက်စ် အဆင့်ကို မရောက်သေးသရွေ့ လူကောင်းပကတိအတိုင်း မြင်နေရမှာ .. ဒါဆိုရင် သူသူကိုယ်ကိုယ် ခွဲလို့ ရသေးလား ..)
“ဆရာမ .. နှစ်ယောက်စလုံး ပိုး ကင်းတယ် တဲ့”
၀မ်းသာစရာပေါ့ .. ဒါဆို လက်ဖွဲ့ ပြင်ထားလိုက်တော့မယ် .. အေး .. ကျမ မှာလိုက်ဦးမယ် .. ပိုး ကင်းတယ်ဆိုတဲ့ အခြေကို ဆက်လက်တည်တံ့အောင် နှစ်ယောက်စလုံး တယောက်ကိုတယောက် သစ္စာရှိဖို့ လိုတယ် .. အပြန်အလှန် သစ္စာရှိရမယ် .. ယောက်ျားလေးကလဲ အပေါ်အပါး ကင်းဖို့ လိုတယ် .. မိန်းကလေး အတွက်ကတော့ ပြောစရာ မလိုတော့ဘူးနော် ..
ကျမတို့ မိန်းမတွေက သစ္စာရှိပြီးသားပါနော်”
အင်း ဒါဆိုလဲ မင်းတို့ ကြားဖူးပြီးသာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် .. ပြောပြရဦးမယ် .. ယောက်ျားက အဝေးမှာ စီးပွားသွားရှာနေတဲ့အချိန်မှာ အိမ်မှာ ကျန်နေတဲ့ မိန်းမက လိမ္မာရင် ကောင်းရဲ့ .. ဇ လေး ရှိတဲ့သူတွေဆိုရင် နောက်တွဲလေးတွေ ရှာတတ်ကြတယ် .. တချို့ကတော့ အဲဒီအတွက် လိမ္မာပါရဲ့ .. အလစ်စောင့်နေတဲ့ အကြံအဖန်သမားနဲ့လဲ တွေ့ရော .. အတွေ့မှာ မျောသွားရင် သွားပါလေရော .. တချို့က တယောက်ထဲ ပျင်းနေတော့ ချိန်းဝိုင်းတွေ ကြိတ်ဝိုင်းတွေ လိုက်ထိုင်ရင်း .. ငွေမျော ငွေနဲ့ လိုက်နေရာက လူပါ ပါသွားတတ်တဲ့ အဖြစ်မျိုး ဆိုရင် မိန်းမတွေ သစ္စာ ရှိသေးရဲ့လား .. သူရော ရောဂါ မကူးနိုင်တော့ဘူးလား
ဆရာမ အခုပြောပြနေတာတွေက ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ..
ဖျစ်ဖျစ်နဲ့တောင် မြည်နေသေးတယ် .. ၀တ္ထုတွေ စာစောင်တွေမှာ ရေးနေကြတာ စိတ်ကူးယဉ်တယ်လို့ ထင်နေလို့လား .. အနီးအနားမှာကို ရှိနေတာ မျက်မြင် ..
ယောက်ျားတွေရော အဲဒီလို ဖြစ်တတ်သလား
ယောက်ျားတွေက အိမ်ထောင်ကျခါစတော့ ငြိမ်လို့ .. ကြာလာတော့ အပိုလေးတွေ မက်လာတတ်တယ် .. ငွေလေး ရွှင်လာ .. အချိန်တွေ ပိုနေ .. မိန်းမနဲ့လဲ ဝေးနေရင် .. တခါတလေပါ ဆိုပြီး ကဲတတ်ကြသေးတယ် .. တခါထဲပါ ပေါ့ .. တလွှာခြားရင် တကမ္ဘာခြားတယ် ဆိုပြီး အကာအကွယ်တွေလဲ မသုံး .. အပြင်စာ ဆိုတာ အိမ်မှာ စိတ်ကြိုက် ချက်ပြုတ်ထားသလောက် ဘယ်သန့်ပါ့မလဲ .. အဆင်မသင့်တော့ ကူးစက်တတ်တဲ့ ပိုးတွေ ပါလာရော .. အဲဒါဆိုရင် အိမ်က မိန်းမကိုလဲ ကူးပြီပေါ့ ..
“သြော် .. ဒါကြောင့် နှစ်ဦးစလုံး အပြန်အလှန် သစ္စာရှိဖို့ ပြောကြတာကိုး .. ကျမ မသိလို့ ဝေဖန်မိတာ ခွင့်လွှတ်နော် .. ဒါဆို သမီးတို့ သွေးစစ်ဖြစ်တာ မှန်တာပေါ့ နော်”
အေး .. မှန်တာပေါ့ နှစ်ဖက်စလုံး စစ်မှလဲ မှန်မှာ ..မျှတမှာပေါ့
၂၀၀၉ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ရေးခဲ့တာ
moe thidasoe has written 34 post in this Website..
View all posts by moethidasoe →
တကယ် စစ်ဖို့ လိုနေပြီကွယ် တဲ့
သေချင်သေသွားပါစေ ဘယ်တော့မှ သွေးမစစ်ဘူး ဆိုတဲ့ လူတွေလည်း အများကြီးတွေ့ဖူးတယ်….
ဒေါက်တာခင်ဗျား … ကျနော့မှာ ဘီပိုးရှိပါတယ် အိမ်ထောင်မကျခင်ကထဲကရှိနေပါသည်။
ယခု အိမ်ထောင်သက် ၂၅ နှစ်ရှိပါပြီ တလောကမှ အမျိုးသမီးမှာ ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထို့ဘို့
ဆေးစစ်တော့ ကူးစက်မှု မရျိပါ။ ဘီပိုးက တခါတလေမှကူးတာလား အခန့်မသင့်မှ ကူးတာလား
ကျွန်မလည်း ဘီပိုးကာကွယ်ဆေးထိုးမယ် ထိုးမယ်နဲ့ ခုထိမထိုးဖြစ်သေးဘူး
ရုံးမှာတော့ တစ်နှစ်တစ်ခါဆေးစစ်ပေးလို့ စစ်ကြည့်တာ ဘာမှတော့မတွေ့သေးပါဘူး
ဒါပေမယ့် အသည်းရောင်ဖူးတယ်၊ သည်းခြေအိတ်လည်းရောင်ဖူးတယ်
ယူဖို့ အစီစဉ်မရှိလည်း စစ်သင့်ပါတယ်.. ယူမယ်လို့ တွေးကတည်းက နှစ်ဘက် စုံစည်းဖို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးသားမို့ …ပိုးတွေ့သည့်အခါ နောက်ဆုတ်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်… အရှက်တကွဲဖြစ်နိုင်တာမို့ … လူလွတ်ဘ၀ကတည်းက ကြိုစစ်သင့်တယ်နော် …။
ကိုဖက်အတွက် internet မှာ ရှာပေမယ့် အားလုံးက ကူးမယ် ချည်းပဲ ရေးထားကြတယ် ..
ထူးပေဆန်းပေသည်လို့ ဆိုရမှာပါ ..
ကိုဖက် positive ဆိုတာကို ဘယ်နှခါ စစ်ခဲ့သလဲ .. (ဘာလို့ ဆိုတော့ ရံဖန်ရံခါမှာ lab error ဆိုတာ ရှိတတ်လို့ပါ)
တခါထဲ စစ်ပြီး positive ဆိုတာနဲ့ ရပ်နေတာလား .. gemma globulin ထိုးခဲ့သေးလား ဆိုတာလဲ မသိရလို့
ဘီပိုး ကာကွယ်ဆေးက သူ့ course နဲ့ ထိုးရပါတယ် .. မထိုးခင်တော့ ရောဂါ ပိုး ၀င်ပြီး မပြီး စစ်ရပါတယ် .. သည်းခြေအိတ် ရောင်တာက အခြားအကြောင်းအရာတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ် .. အသည်းရောင်ကလဲ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ် .. ဒါကြောင့် ကျည် တတောင့်နဲ့တော့ ငှက်တိုင်း သေပေးလို့ မရပါဘူး
သဂျီး .. ခေါင်းစဉ် တပ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါ .. စစ တင်ခြင်းတုန်းက ခေါင်းစဉ် မပါသွားလို့
အင်း ဒါမျိုးက မ ဖြစ်ဖြစ် ကျား ဖြစ်ဖြစ် စစ်သင့်ပါတယ်။ ဆေးစစ်ပြီးတော့ယူတော့…ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာ..။
နှစ်ဦးစလုံး ဘာမှမဖြစ်မှန်းသိတော့လည်း အချစ်ပေါ်ယုံကြည်မှုတိုးပြီး ချစ်နိုင်သလို။ သိတော့လည်း ကြိုတင်ကုသဖို့ပြင်ဆင်နိုင်တာပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ရင် ပေါ့လေ..မယူခင်ရည်းစားဘ၀တည်းက စစ်ကြရင်ပိုကောင်းမယ် ထင်တယ်။ကိုယ်က တကယ်ယူမယ်လို့စိတ်ကူးထားရင်ပေါ့လေ..။
အသည်းရောင် အသားဝါ ကာကွယ်ဆေး ထိုးချင်ပေမယ့် အသားနာမှာစိုးလို့ ဆိုပြီး မထိုးဖြစ်ခဲ့တာ ။
အခု ဒေါက်တာ့ ပို့ စ် ဖတ်ပြီး ကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ အားရှိသွားပြီ ။ နောက်ရက် သွားထိုးမယ်ဗျာ ။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးလို့ ရခဲ့မယ် ဆိုရင်ပေါ့
ဟီးဟီး … အတူတူပဲ … ကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် နာမှာစိုးလို့ … မေ့မေ့လျှော့လျှော့နေလိုက်ရာက မနေ့ကမှ သူများ မန်းထားတာတွေ ဖတ်မိပြီး … ကာကွယ်ဆေးထုိးရမယ်ဆိုတဲ့ အသိဝင်လာတော့ … ဘာကြောင့် ငါ့ကို ထိုးဖို့ မပြောတာလဲဆိုပြီး မဆိုင်တဲ့ အိမ်ကလူတွေကို ပတ်ရမ်းပစ်လိုက်သေးတယ် … ။ နောက်မှ ကိုယ်က နာမှစိုးလို့ မထိုးပဲ ထားရာက မေ့သွားပါလား ပြန်သတိရမိတော့တယ်.. ဒါပေမဲ့လည်း ရန်တွေ့တာက တွေ့ပြီးနေတော့ … စကားကောင်းကောင်းပြန်ပြောဖို့တောင် စိတ်ကောက်နေကြတယ် ဟီးဟီး
အိမ်ထောင်မပြုခင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ဆေးစစ်တယ်ဆိုသာ အရမ်းကောင်းလို့ထောက်ခံပါတယ်။ပိုးတွေ့တယ်ဆိုလည်းရလာမယ့်သားသမီးအတွက်ပြင် ဆင်လို့ရပါတယ်။
သဂျီးကတော့ လိုပါဘူးတဲ့။ လူ့ဘဝရတုန်းကဲထားတဲ့၊ ဒါမှ တရားဓမ္မနဲ့လျော်ညီသတဲ့။ ဩော် သဂျီး သဂျီး ဘယ်တော့များမှ အကျွတ်တရား ရပါ့မလဲ။ သဂျီးကတော်ကလဲ သူလိုအိုကြီးအိုမကို ချွတ်တော့မယ့် ပုံမပေါ်ဘူး။ သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ သတ္တဝါတခု ကံတခု…
ကျမတို့တော့ နှစ်တိုင်းရုံးမှာ တစ်နှစ်တစ်ခါစစ်တယ် ဘာရောဂါမှတော့ မရှိဘူးလို့အဖြေထွက်တာပဲ မနှစ်ကဆေးစစ်တော့ ဘီပိုးမရှိတာနဲ့ တစ်ခါထဲကာကွယ်ဆေးထိုးထားလိုက်တယ် ကိုယ်က အသွားအလာများတော့ ဘီပိုးကကူးတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပဲကာကွယ်ဆေးထိုးထားလိုက်တာ ဒါနဲ့ ကိုဖက်တီးပြောသလိုပဲ ကျမတို့အမေမှာ ဘီပိုးရှိတယ်လို့အဖြေထွက်တယ် ဒါပေမယ့် ကျမတို့မိသားစုမှာ တစ်ယောက်မှမရှိဘူး အံသြဖို့တော့ကောင်းတယ် ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးနော်
Hi, just wanna mention here is that most information is truly correct here. HepB medication so far is very expensive, I am the lucky one to treat for free here in Finland bec medication in Finland is free for all of its citizen and residents. The total cost of the medication is vary, because there are quiteanumber of different types of medications, some of them take times to cure and some of them the virus will fight back. The mostly used and the most expensive one so far will cost around 35 000/year, which I am using it right now and the virus load has been reduced into half within 5months. So the doctor suggested me to go forayear. The medication is Interferon aplha-2a which I have to inject onceaweek and this medication is also known HVC, C virus. The doctor does not said i will cure completely but this will control the virus for sometime and lengthen my liver, which in my Father case, we could not or did not have chance to treat him and he died at the age of 61 because of liver failure. It was serious, he vomitted blood often and I dont want everyone to happen such case like my father leaving us so early. So get tested, get vaccinated and get treated if necessary.
*this medication is also known HVC, C virus as well.